एसईईको नतिजा पर्खेर बसेका विद्यार्थीलाई गुरुकुल विद्या सदन मा.वि नयाँबजार र भाष्कर मेमोरियलको इन्ट्रान्स बुस्टर | साँचो खबर Online Khabar
२०७८ श्रावण ४, सोमबार (११ महिना अघि)
गुरुकुल नयाँ बजार र भाष्कर मेमोरियलद्वारा एसईई को नतिजा पर्खेर बसेका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै उत्प्रेरणामूलक परामर्श सहित इन्ट्रान्स बुस्टरको विमोचन | गुरुकुल नयाँ बजार र भाष्कर मेमोरियल स्कूलको कार्यक्रममा डा. महाविर पुनले इन्ट्रान्स बुस्टरको विमोचन गर्नुभयो !
२०७८।०४।०१ मा आयोजक गुरुकुल विद्या सदन मा.वि नयाँबजार र भाष्कर मेमोरियल स्कूल फूलवारीले भर्चुअल कार्यक्रम (जुम) मा , प्रमुख अतिथि डा. महावीर पुनद्वारा इन्ट्रान्स बूस्टर बूकको बिमोचन । एसइइ दिएर बसेका विद्यार्थीलाई उत्कृष्ट प्लस टु मा नाम निकाल्न सफल हुनको लागि अति नै उपयोगी । पोखराका करिब २ दर्जन प्रतिष्ठित कलेजमा लामो समयसम्म अध्यापन गराइरहनुभएका अनुभवी प्राध्यापकहरुको प्रयासबाट तयार पारिएको पुस्तक । करिब २५००मल्टीपल च्वाइस प्रश्नहरु, उत्तर र व्याख्या सहित प्लस दुई पढ्दा पनि उपयोगी हुने पुस्तक । महावीर पुनले यो पूस्तक अतिनै उपयोगी हुन सक्ने र एमसीक्यु को उत्तर दिँदा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरुमा प्रकाश पार्नु भयो ।
कान्तिपुर टेलिभिजनकी समाचार सह–सम्पादक श्री पाण्डेले विद्यार्थीहरुलाई अआफ्नो क्षमता र रुचीलाई आधार मानेर विषय छनोट गर्नुपर्ने सुझाव दिनु भयो । विशिष्ट अतिथि डा. तारा जी ख्याती प्राप्त ‘मोटिभेटर स्पिकर’ सफल जीवनको लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु र सहि गन्तब्य पहिचान सम्वन्धि उत्प्रेरणा सम्बन्धि उत्प्रेरणामूलक भनाइहरु राख्नु भयो । विशेष अतिथि वक्ताहरु डा. सूरज अधिकारी जोसिका बरालले आफ्ना अनुभवहरु प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमको अध्यक्षता दुई विद्यालयका अध्यक्ष माधवी देवी बास्तोलाले गर्नु भयो । र कार्यक्रम अत्यन्तै सफल भएकोमाा खुसी व्यक्त गर्नु भयो । विद्यालयका प्रवन्ध निर्देशक विश्वराज वास्तोलाले कार्यक्रमको उपयोगिताको वारेमा चर्चा गर्नु भयो । विद्यालयका संरक्षक धर्मराज कोइराला, गुरुकुल मा.वि.का प्राचार्य अचुत पाण्डेले स्वागत गर्नु भयो । प्लस टु संयोजकद्वय रवि कार्की र बशन्त कुमार श्रेष्ठले गुरुकुल मा.वि. र भाष्कर मेमोरियल स्कूलका विशेषताहरुका बारेमा व्याख्या गर्नु भयो । कार्यक्रमको सञ्चालन भाष्कर मेमोरियल स्कूलका प्राचार्य नारायण आचार्यले गर्नुभयो ।
शैक्षिक तथा प्राविधिक क्षेत्रमा लामो समय अनुभव भएका व्यक्तिहरुद्वारा सञ्चालित ।
यसै वर्ष देखि एम.वि.वि.एस र इन्जिनियरिङ तयारी कक्षाहरु सँगसँगै सञ्चालन हुने ।
प्रभावकारी अनलाइन कक्षाहरु सञ्चालन।
कलस्टर गार्जियनसिप, अतिरिक्त कृयाक्लाप, प्रयाप्त खेलमैदान, फुटसल मैदान आदि इत्यादी
ताराकुञ्जमा कोडकाव्यको वर्कसप सम्पन्न
महामारीबीच पनि साक्षर नेपालको अभियान अगाडि
काठमाडौंसहित २३ जिल्ला अझै साक्षर घोषणा हुन बाँकी (सूचीसहित
काठमाडौं उपत्यकाका विद्यालय असोज १ गतेदेखि खुल्दै
भियतनामका विद्यालयहरुले सुरु गरे नयाँ शैक्षिक सत्र